Date My Pet » Mampiaraka A Ianao Boomerang sipany?
Mampiaraka A Ianao Boomerang sipany?
Last nohavaozina: Jul. 03 2020 | 2 min namaky
"Tia ahy. Tsy tia ahy. "—Anonymous
Tovovavy rehetra no mitondra ny datin 'ity lehilahy. Izy toy ny mahazatra toy ny allergie na tsy fahazakana ao amin'ny lohataona. Vehivavy, Fantatrao ny teny ...
Nieritreritra ny ahitra dia maitso teny am-pitan'ny. Na dia "nila ny toerana." Koa, tsy be fampitandremana, ataony levona ny zavatra izay hahatonga Houdini dia mirehareha.
Ianao mitaraina. Ianao manontany ny antony. Ary farany, amin'ny fotoana sy ny elanelana misy eo aminao, ianao mitantana ny hanasitrana ny fonao sy mandroso.
Be ny gaga, volana / taona taty aoriana dia hiverina. Tamin'ity indray mitoraka ity raozy mena, fangatahan ny famelan-keloka, ary ny naniry mba hamelona indray lelafo taloha. Matetika, rehefa ianao ho liana amin'ny olona vaovao.
The 64,000 fanontaniana lasa ... Tokony hitondra azy indray, na ianao no ho aretin'andoha sy ny fahoriana bebe kokoa amin'ny ho avy?
Tsara, izany rehetra izany dia miankina ....
Ity misy mamitaka ny taratasy ampiasaina AS A tondrozotra.
Izy no mamaha ny anankiray ny kardinaly fitsipi-mampiaraka? Ireo ho toy ny tsy-notre mifraody amin'ny namana na havana tsara indrindra, na ara-batana herisetra, na manitsakitsaka ny matoky. Raha izany, "Aza tsy mba mihoatra mandeha."
Mbola nisy fotoana ampy ho azy ny efa matotra ka ho tonga amin'ny tokony homarinana avy amin'ny zava-nitranga? No tena manaiky ny diso ny fomba? Na dia izy fotsiny angamba ny faniriana ny zavatra mahazatra?
Nahoana no tiany ny fifandraisana mba ho havaozina? Moa ve noho ny simika eo amin'ny roa mafana ianao taloha? No mila nindram-bola na trano hipetrahana? Tsy hanahirana dia antony tsara tsy mba ho tafaraka indray. Aza avela ny miverina ho toy ny fahafahana nivoatra ho anareo.
Inona no zavatra farany? Dia ny fomba mangatsiaka sy mafy fo? Na tsara fanahy sy tsy manome tsiny? Ohatra, ry zalahy izay maka ny kanosa ny lalana amin'ny alalan'ny fanaperana fifandraisana an-tariby rehetra tampoka rehetra, na fandefasana SMS ianao ny faran'ny zavatra zara raha mendrika ny hooking miaraka indray.
Dia misy zavatra tsara kokoa momba azy fa ratsy? Manaova lisitry ny mahatsara sy maharatsy azy dia mijery amim-pahendrena sy saina tsy miangatra. Ny zava-dehibe indrindra, manaraka ny sosokevitra mifono fahendrena ny Hebreo: "Rehefa mampiseho anao ny olona hoe iza izy ireo, mino izy ireo. "
Ka manan-danja koa ny toe-javatra manodidina ny fisarahana dia ny fotoana. Izy no hamoahana ny avy mialoha Krismasy? Rehefa avy ianao, na dia narary anao noho ny vintana? Ny olona izay "rariny-weathered namana" no zara raha azo isaina amin'ny mandritra ny fotoan-tsarotra. Diniho ny tenanao tsara vintana fa nahita avy, raha izany no izy. Hanapaka ny famoizana olon-tiana.
Aza hilatsaka fotsiny ny Champagne solomaso mbola. Diniho nitondra azy indray amin'ny "fotoana fizahan-fotoana" amin'ny "fidirana voafetra." Fa tandrify vokatra, fahatokiana tokony ho "nahazo" Tsy mihevitra.
Rehefa nisaraka, dia nisy nasiana antoko-mpihira ny olona chiming amin'ny, "Efa niteny taminareo aho?" Raha nihevitra ny olon-drehetra fa tsy mendrika ny aminareo, dia mety ho hevitra eto. Aza manala izany ho afa-maina. Na dia mety ho jamba ny fitiavana, dia tokony tsy ho clueless koa.
Azonao manam-bola ny Gamble ny sanity sy ny fiheverany ny tenany indray?
Misy fotoana tsara vintana maka dia mety ho ratsy Gamble. Ve ianao amin'izao fotoana izao eo amin'ny fifandraisana hafa izay manana hery anaty fanantenana? Amin'ny toe-javatra ity, ny "fiverenan'ny ankizy" tsy tokony havela hiverina!
Diniho ireo toro-hevitra ara-potoana mba hiatrehana ny Boomerang sipany. Ny fihazonana ao an-tsaina hoe "Ireo izay tsy mba hianatra avy amin'ny lasa tsy maintsy ho hamerina azy io."
7 Ratsy tarehy fahamarinana About Modern Dating